कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति : आठ दिनमा ३६ जनाको मृत्यु – Nepal Japan
नेपाल जापान २९ श्रावण १४:०६
लकडाउन अवधिभर नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरु भेटिए पनि मृत्युदर न्यून थियो । चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन खुल्दासम्म ५० को हाराहारीमा रहेको मृत्यु पछिल्लो एक हप्तामा ह्वात्तै बढेको छ र साउन २० देखि २८ गतेसम्म मात्र ३६ जनाको ज्यान गयो ।
कोरोना संक्रमण हुन नदिन अब चाल्नुपर्ने कदम अरुको देखासिकी हैन आफ्नै किसिमको हुनुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । सरकारले लकडाउन लगायतका काम स्थानीय सरकार र निकायको जिम्मा दिएपछि देशका विभिन्न शहरहरुमा निषेधाज्ञा र सट डाउन गरिएका छन् तापनि संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । मृत्यु पनि अप्रत्यासित रुपमा बढेको छ । साउन २८ गते मात्रै ११ जनाले ज्यान गुमाए ।
साउन २० गतेदेखि २८ गते साँझसम्म मृत्यु भएका ३६ मध्ये १७ जना उपत्यकाका अस्पतालमा उपचारत थिए भने ७ जना पर्साका अस्पतालमा । धनुषाका ३, मोरङका २ र काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिरहा, सुनसरी, बाँके, सप्तरी, महोत्तरी र कास्कीका क्रमशः १र१ जनाको यस अवधिमा मृत्यु भयो ।
गएका ८ दिनमा मृत्यु भएका ३५ मध्ये १८ जना आईसीयूमा उपचाररत थिए भने ४ जना भेण्टिलेटरमा । अन्यको आइसोलेसनमा उपचाररत रहँदा मृत्यु भएको थियो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युको अन्यत्रको केस हिस्ट्रीसंग मेल खाएको छैन । ८ दिनको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका ९ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । जसमा गम्भीर किसिमको दीर्घरोग नभएर खोकी, श्वास प्रश्वास, झाडा–बान्ता जस्ता लक्षणहरु थिए । कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको भन्दै उनीहरुलाई अस्पताल लगिएको थियो ।
यस्तै १९ वर्षीय २ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ, जसमा अरु कुनै गम्भीर समस्या थिएन ।४० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १३ जनाको मृत्यु भयो । यो समूहका अधिकांशलाई निमोनिया, मधुमेह, मुटु रोग, मिर्गौला, उच्च रक्तचापजस्ता दीर्घरोग देखिएको थियो ।
गएका ८ दिनमा ६० देखि ८० वर्ष उमेर समूहका ११ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भयो । उनीहरुमध्ये अधिकांश दीर्घरोग लिएर उपचार गराउन अस्पताल पुगेका थिए । उपचारका क्रममा स्वाब परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
शुक्रराज ट्रपिकत तथा सरुवा रोग अस्पतालको निर्देशक सागरराज भण्डारीका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितमा युवा, दीर्घरोगी र वृद्धा सबै छन् । बढी लक्षण भएकाहरु र कोभिडले गाह्रो पारेका चाहिँ दीर्घरोगी र वृद्धबृद्धा छन् ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार दीर्घरोगीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम हुन्छ । विभिन्न दीर्घरोगले रोग प्रतिरोधात्मक कोषिकालाई दबाउने र निश्क्रिय बनाउनुका साथै फोक्सोका कोषिकाहरूमा असर पार्छ ।
छातीसम्बन्धी डाक्टर सन्तकुमार दासका अनुसार श्वास–प्रश्वासका समस्या भएका संक्रमितहरु अधिकांश धुमपान गर्ने छन् । क्षयरोग र ब्याक्टेरियल निमोनियाको खतरा पनि धुमपान गर्नेहरूमै बढी देखिन्छ । ‘श्वास–प्रश्वास र निमोनिया भएकाहरुमा भाइरसले चाँडो संक्रमण गरेर गलाउनु सामान्य हो ।
कोरोना संक्रमण जसरी भैरहेको छ त्यसले समुदायमा फैलिसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । काठमाडौंका ग्रामीण क्षेत्रमा पनि संक्रमण देखिन थालेको छ । काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नंं ९ आरुबारीमा एक युवतीमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । अहिले संक्रमित भएको क्षेत्र सिल गरिएको छ । संक्रमित युवती उपत्यका बाहिर नगएको भए पनि आमाको उपचारका क्रममा विभिन्न अस्पताल पुगेकि थिइन ।
विज्ञहरु नेपालमा कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन पछिल्लो समय बढदै गएको संक्रमण र मृत्युले जोखिम बढ्ने संकेत मिलेको बताउनुहुन्छ ।
डा. पुनका अनुसार आगामी दिन झन चुनौतीपुर्ण बन्दै जानेछ ‘पछिल्ला मृत्युहरुले संक्रमण अरु देशमा जस्तो खराब अवस्थामा जाने त होइन भन्ने भएको छ ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन भने राज्यले संक्रमणको कुन चरणमा छौं भनेर प्रष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै राज्यले नै लकडाउन हट्यो भन्ने सन्देश दिँदा पनि जोखिम बढेको दावी गर्नुहुन्छ ।